Cloud Computing: Disadvantages Ny lafiny hafa amin'ny farantsakely! | Avy amin'ny Linux
Ao amin'ny lahatsoratra teo aloha momba ilay lohahevitra, nantsoina «XaaS: Cloud Computing - Ny zava-drehetra ho serivisy«, Izay nanasongadinana ireo tombontsoa, ​​tombontsoa, ​​tombony ary ireo toetran'ny Cloud Computing ankehitriny sy ho avy, voaporofo fa na inona na inona zavatra toa ity no làlana hirosoana amin'ny tontolon'ny varotra sy ny tontolon'ny varotra ankehitriny.
Na izany aza, tsy nokasihina na nampalalina izy ireo lafiny ratsy na maharatsy ny teknolojia voalaza ho an'ny olom-pirenena iraisana, ny fiarahamonina amin'ny lafiny mety aminy ary na dia kely aza ny fomba fanatonana azy avy amin'ny fijerin'ny filozofia ny Free Software sy GNU / Linux. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ireo lafiny ireo izahay handanjalanjana ny fampahalalana momba ny teknolojia voalaza.
Ny mpampiasa sy ny mpanjifan'ny rindranasa sy serivisy mifototra amin'ny computing cloud dia mila antoka fa misy sy fidirana amin'izy ireo, ary ny mpamatsy azy ireo dia mampihatra ny fomba azo antoka sy ilaina momba ny fandriam-pahalemana sy ny tsiambaratelo ary ny teknolojia mba hanalefahana ireo risika sy tsy fahombiazana atrehin'izany haitao izany satria mifototra amin'ny rahona tanteraka.
Ilain'izy ireo izany antoka izany hahafahany mifototra amin'ny fanapaha-kevitr'izy ireo amin'ny fampahalalana matanjaka, voaorina tsara ary marina. Midika izany fa ireo mpilalao fototra amin'ity haitao ity, izany hoe ireo mpamatsy, dia tototry ny fangatahana fanamarinana hatrany.
Saingy ankoatry ny mety tsy fahombiazana, risika na fanafihana izay mety hitranga ny teknolojia dia marina ihany koa fa azo jerena na ny filozofia miasa izy manohitra tanteraka izay mety ho ankafizin'ny maro na sary an-tsaina hoe fahaleovan-tena na fahalalahana iombonany.
1.1 Loza mety hitranga amin'ny filaminana
1.1.1 Very fitondrana
1.1.3 Lesoka insulation
1.1.4 Loza mety hanarahan-dalàna
1.1.5 Fifampiraharahana interface interface
1.1.6 Fiarovana data
1.1.7 Famafana data tsy feno na tsy azo antoka
1.1.8 Mpikambana maloto
1.2 Loza momba ny fahalalahana
1.2.1 Rindrambaiko maimaim-poana mifanohitra amin'ny lozisialy tsy miankina
1.2.2 Rindrambaiko maimaim-poana mifanohitra amin'ny Cloud Computing
Loza mety hitranga amin'ny filaminana
Ny loza ateraky ny fiarovana ny rahona amin'ny alàlan'ny rahona dia voavaha amin'ny fomba mahomby miaraka amin'ny tombontsoa azo antoka azo avy amin'ny mpivarotra samihafa. Ny computing cloud, izy tenany, dia mety manana tombony lehibe hanatsarana ny filaminana sy ny fanoherana ny tsy fahombiazana na fanafihana. Na izany aza, anisan'ny loza mitatao indrindra amin'ny resaka filaminana izay mety hitranga amin'ny fikirakirana rahona ny:
Mety hisy fiantraikany amin'ny fotodrafitrasa rahona rehefa mandao ny fibaikoana ny singa teknolojia sasany ny mpanjifa na ny mpampiasa iray izay mety hisy fiantraikany amin'ny filaminan'ny mpamatsy iray ihany ao anaty rahona. Na ny mifanohitra amin'izany no izy raha toa ka tsy manarona ny lafiny fiarovana ny serivisy voalaza fa serivisy izay afaka mamorona "loofoles" amin'ny fiarovana fiarovana.
Ny mpanjifa na ny mpampiasa dia mety mifamatotra akaiky amin'ny mpamatsy rahona ary voasakana tsy hiverina, izany hoe amin'ny tontolon'ny IT anatiny (eo an-toerana), raha toa ny fifanarahana natao dia tsy manome antoka fa ny fitaovana, ny fomba fanao, ny endrika data mahazatra na ny interface interface dia manome antoka ny fahafahan'ny serivisy sy ny rindranasa ary ny angona. Amin'ny toerana misy anao, ny fifindran'ny mpanjifa amin'ny mpamatsy iray hafa mankany amin'ny iray hafa na ny fifindra-monina data sy serivisy na ao anatiny, dingana iray izay sarotra loatra ary saika tsy azo atao mihitsy.
Ny tsy fahombiazana na ny fanafihana amin'ireo mekanisma manasaraka ny fitehirizana, ny fitadidiana, ny fivezivezena, na ny fisandohana ho mpamatsy (Guest Hopping Attack) dia matetika tsy dia matetika loatra noho ny haavon'ny fahasarotana, saingy ny fahasahiranana dia tsy mahatonga azy ireo tsy ho tanterahana.
Loza mety hanarahan-dalàna
Imbetsaka noho ny lafo na maoderina an'ity karazana teknolojia ity, ireo mpanome izany dia mazàna manandrana mampihena ny fandaniana amin'ny fepetra takiana amin'ny lalàna na fanaraha-maso, izay afaka mandrahona ny fizotry ny fifindra-monina mankany amin'ny rahona na miasa efa an-tserasera. Tranga hafa mety hitranga fa ny fampiasana ireo fotodrafitrasa ampiasaina amin'ny rahona dia tsy afaka hahatratra ny haavon'ny fanarahan-dalàna nampanantenaina ny mpampiasa sy ny mpanjifa.
Fifampiraharahana interface interface
Ny interface interface client an'ny mpamatsy rahona dia azo alefa amin'ny alàlan'ny Internet, inona no mety hitranga risika fiarovana bebe kokoa, indrindra rehefa atambatra amin'ny teknolojia na politika fidirana an-davitra izy ireo, ankoatry ny faharefoana mahazatra an'ireo mpitety tranonkala taloha.
Indraindray ho an'ny mpampiasa na mpanjifa mpamatsy computing cloud hanamarina tsara fa mampihatra na mampihatra ny fomba fitantanana angon-drakitra marina na mahomby indrindra ny mpamatsy, somary sarotra ihany, ka sarotra aminao ny mahazo antoka fa tantana mifanaraka amin'ny lalàna ny data. Ary amin'ity lafiny ity, matetika izy ireo dia tsy mila afa-tsy amin'ny tatitra tsotra momba ny fomba fitantanana data na famintinana fanamarinana momba ny hetsika ataon'izy ireo eo amin'ny sehatry ny fikirakirana sy ny fiarovana ny angon-drakitra, ary ny fifehezana angon-drakitra an-dry zareo.
Famafana data tsy feno na tsy azo antoka
Tranga iray hafa mitovy amin'ny teo aloha (Data Protection), rehefa mpampiasa na mpanjifa mpamatsy informatika rahona dia tsy manana ny tena mety hanamarinana an'io mitovy esorina mandrakizay ny angona angatahina, satria indraindray ny dingana mahazatra dia tsy manala ny tahiry maharitra. Noho izany, ny fanesorana tanteraka na tsy azo antoka ny data rehetra dia tsy azo atao na tsy ilaina, amin'ny fomba fijerin'ny client sy ny mpamatsy, noho ny antony maro samihafa.
Tsy fahita firy ny fahasimbana atolotry ny mpikambana maloto, fa matetika rehefa mitranga dia manimba be.
Loza momba ny fahalalahana
Raha te hilaza an'io hevitra io dia tsara ny manonona ity teny nindramina manaraka avy tamin'i Richard Stallman ity:
Ao amin'ny Internet, tsy ny rindrambaiko manana anao irery no very ny fahafahanao misafidy. Ny serivisy fanoloana rindrambaiko (SaaSS), izany hoe "ho vice "Mpisolo toerana lozisialy" dia fomba iray hafa hanalavirana ny fahefana amin'ny solosainao.
Rindrambaiko maimaim-poana mifanohitra amin'ny lozisialy tsy miankina
Araka ny hitantsika tamin'ny fotoana hafa, Hatramin'ny nanombohan'ny tontolon'ny fampandrosoana ny lozisialy, niaraka tamin'ny lozisialy tsy miankina sy loharano misokatra (SL / CA) niaraka tamin'ny lozisialy tsy miankina sy loharanom-baovao (SP / CC). Ity farany no lohalaharana hatrany amin'ny resaka izay adika matetika ho fandrahonana amin'ny fifehezana ny solosaintsika sy ny mombamomba antsika manokana sy manokana.
Ity fandrahonana ity dia matetika miseho amin'ny alàlan'ny fampidirana endrika manimba na fiasa tsy ilaina.toy ny spyware, varavarana ambadika ary ny fitantanana fameperana nomerika (DRM). Izay mampiharihary matetika ny fiainantsika manokana sy ny filaminana ary mampihena ny fahaleovantenantsika sy ny fahafahantsika.
Noho izany, ny fampandrosoana sy ny fampiasana ny SL / CA dia vahaolana mety foana hanoherana ny SP / CC. Noho ny fahalalahana ilaina efatra (4), efa fantatry ny rehetra. Fahafahana manome antoka fa izahay mpampiasa dia mifehy izay vita amin'ny solosaintsika sy amin'ny Internet.
Rindrambaiko maimaim-poana mifanohitra amin'ny Cloud Computing
Na izany aza, ny fisehoan'ny maodely 'Cloud Computing' vaovao manolotra fomba vaovao tena manintona fa ny rehetra (mpampiasa, mpanjifa, olom-pirenena ary fikambanana, miankina amin'ny fanjakana sy tsy miankina), dia mamela ny fifehezana ny asantsika, noho ny fahafahantsika (heverina) fahalalahana ary koa fampiononana sy fivoarana.
Raha fintinina, amin'ity fotoana ity dia azo lazaina izao manaraka izao ny vokatra mitovy amin'ny Cloud Computing (na Cloud Services / SaaS) sy ny lozisialy Proprietary:
mitarika valiny manimba toy izany koa izy ireo, fa ny mekanisma kosa tsy mitovy. Miaraka amin'ny rindrambaiko manana ny fananana dia ny fanananao sy ampiasainao kopia iray izay sarotra sy / na tsy ara-dalàna ny manova azy. Miaraka amin'ny SaaS ny mekanisma dia ny tsy fanananao ny kopia izay anaovanao ny asanao manokana.
Ary noho izany, amin'ny tsy fahafahantsika manova dia tsy azontsika fantarina hoe inona marina no ataony amin'ny data sy ny mombamomba antsika manokana.
Satria malalaka tokoa io teboka manokana io dia manasa anao izahay hamaky ny lahatsoratra feno nataon'i Richard Stallman momba azy.
Ny risika rehetra miseho etsy ambony dia tsy voatery taratry ny filaharan'ny fitsikerana manokanaFa kosa, nasehon'izy ireo mazava fotsiny ny tontolon'ny risika mety hitranga ao anatin'ny sehatry ny fikirakirana rahona.
Ny loza ateraky ny fampiasana computing cloud dia tsy maintsy ampitahaina amin'ireo risika azo avy amin'ny fitazonana vahaolana nentim-paharazana, toy ny maodelin'ny Fotodrafitrasa anatiny na eo an-toerana. Ary na dia eo amin'ny sehatry ny orinasa, indostrialy na ara-barotra aza ny tombony dia mazàna betsaka, ny fisian'ny risika tsotra voalaza etsy ambony dia mety hiteraka tsy fahombiazan'ny orinasa iray manontolo, na fanimbana lehibe ny lazany, miaraka na tsy misy vokany ara-dalàna.
Ary na dia tsy tamin'ny fijanonana farany aza, fatiantoka lehibe eo amin'ny lafiny fahaleovan-tena sy fahalalahana, indrindra rehefa ampiharina amin'ireo mpampiasa tsy ampy taona toa ny isam-batan'olona, ​​vondrom-piarahamonina, hetsika na fiarahamonina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Cloud Computing: fatiantoka - Ny lafiny hafa amin'ny farantsakely!
Beatriz Aurora Pinzón dia hoy izy:
Valiny tamin'i Beatriz Aurora Pinzón
Antony tsy fampiasana Microsoft Windows